Friday 21st of January 2022 / 02:29:38 PM
६ वर्षको बच्चाको कमाइ १ अर्ब बढी !
एकजना ६ वर्षको बच्चाले कति कमाउन सक्छ ? तपाईंले सोच्न सक्नुहुन्छ यति सानो उमेरको बच्चा पनि काम गर्न सक्छ र ?
तर, रेयान हरेक साता युट्यूबमा खेलौना सामाग्रीको रिभ्यू गर्छन् र यसका लागि सम्बन्धित कम्पनीले उनका आमा बुवालाई राम्रो रकम प्रदान
कहिलेकाहीँ कम्प्युटर खुल्न धेरै समय लाग्छ । कम्प्युटर चलाउन ढिलो हुँदा कम्प्युटर चलाउन नै हैरान लाग्छ । कम्प्युटरमा राखेका विभिन्न सफ्टवेयर कम्प्युटरसँगै खुल्ने हुँदा कम्प्युटरले खुल्न समय लिन्छ । हामीले
फेसबुकमा शेरे नामले चर्चित यी व्यक्ति को हुन (वास्तबिक नाम र ठेगाना सहित)
अनलाइन दर्पण 2017-09-18
सामाजिक संजालमा तपाइं हामी सबैले श्यामश्वेत (ब्ल्याक एण्ड ह्वाइृट) स्केचमा देखिने एक पात्र निकै चर्चित छन् । नेपालमा यी व्यक्तिलाई ‘शेरे’ बनाउँदै हाँस्यव्यंग्यमा खुवै प्रयोग गरिन्छ । तर, यी को हुन् भन्ने विषयमा भने धेरैलाई जानकारी नहुन
इतिहासकै जम्बो मन्त्रीपरिषद् बनाएको भन्दै, प्रधानमन्त्री देउवालाई माग्ने बुढाको खुला पत्र
काठमाडौं। हाँस्यकलाकार केदार घिमिरे (माग्नेबुढा)ले प्रधानमन्त्रीलाई व्यंग्यात्मक पत्र लेखेका छन् । उनले इतिहासकै जम्बो मन्त्रीपरिषद् बनाएको भन्दै पधानमन्त्रीलाई व्यंग्य गरेका हुन् ।
सामाजिक संजाल फेसबुक मार्फत उनले प्रधा
अब फेसबुकमा रंगीन कमेन्ट
फेसबुकले अहिले एक नयाँ फिचरको परीक्षण गरिरहेको छ । यसमा रंगीन पृष्ठभूमियुक्त स्टाटसजस्तै रंगीन पृष्ठभूमिवाला कमेन्ट समेत पोष्ट गर्न सकिन्छ ।
यस फिरचमा प्रयोगकर्ताका कमेन्ट्स एक रंगीचंगी फोकाहरुको रुपमा देखिनेछन् । जबकी हालसम्म कमेन्ट्स स
हराएको फोनलाई लक गर्ने र ठाँउ पत्ता लाउने तरिका
अनलाइन दर्पण 2017-08-22
एन्ड्रोइड डिभाइस मेनेजर (एडिएम) को प्रयोग गरेर मोबाइलको अन्तिम पटक प्रयोग कहाँ भएको हो त्यहाँको लोकेसन पत्ता लगाउन सकिन्छ । त्यसका लागि निम्न कार्य गनुपर्ने हुन्छ ।
१. पहिला एन्ड्रोइड डिभाइस मेनेजर को वेबसाइट www.google.com/android/
अनलाइन दर्पण 2017-07-29
समयनुसार प्रबिधिको बिकासले पनि ठुलो फड्को मारीसकेको छ | संचारको दुनियामा दिन प्रतिदिन तिब्र विकास भैरहेको छ | स्मार्टफोन चलाउनेहरु प्राय सबैले आफ्नो मोबाइलमा लक सिस्टम राखेका हुन्छन्। कहिलेकाहीँ उनीहरु आफ्नो फोनको लक खोल्ने पासवर
मोबाइलको मेमोरी फुल भएर हैरान हुनुहुन्छ ? खाली गर्ने तरिका सिक्नुहोस्
अनलाइन दर्पण 2017-07-20
मोबाइल फोन ह्याङ हुने तथा स्लो चल्ने कयौं कारणले हुन सक्छ । तर, यसको एक प्रमुख कारण स्टोरेज फुल हुनु हो । हामी आफ्नै केही गल्तीका कारण फोनको स्टोरेज फुल हुन्छ । यी गल्ती के हुन् र कसरी गल्तीबाट बँच्ने भन्ने ज्ञान
बालबालिकालाई प्रविधिको कुलतबाट कसरी जोगाउने
अनलाइन दर्पण 2017-08-30
स्मार्टफोन अथवा आइप्याड चलाउँदै गरेको अवस्थामा बालबालिकाको दिमागको अध्ययन गर्दा डरलाग्दो कुरा पत्ता लागेको छ । यस्ता सामाग्री चलाउने केटाकटीको दिमागको अगाडिपट्टिको भाग (फ्रोन्टल कोर्टेक्स)मा नराम्रो असर पर्छ । डरलाग्दो कुरा के छ भने स्मार्टफोन चला
प्रकृतिको सुन्दर दृष्य जो कम्प्युटरको डेक्सटपमा सजिएर संसारमै फैलियो, यस्तो छ रहस्य
अनलाइन दर्पण 2017-04-08
कम्प्युटर प्रयोगकर्ताहरुका लागि यो तस्वीर नौलो होइन, तर यसको वास्तविकता र रहस्यबारे निकै कमलाई मात्र जानकारी हुन सक्छ ।सन् २००१ मा रिलिज भएको माइक्रोसफ्टको अपरेटिङ्ग सिस्टम ‘विन्डोज एक्सपी’मा यो तस्वीर ‘डिफल्ट डेक्सटप इमेज’
टेलिकमका ग्राहकलाई ब्यालेन्स सकिँदा ‘ऋण’
अनलाइन दर्पण 2017-03-28
काठमाडौं १६ चैत । नेपाल टेलिकमले जिएसएम तथा सिडिएमए प्रिपेड सेवाका सेवाग्राहीहरुलाई ब्यालेन्स नहुँदा फोन गर्न ऋण (लोन) उपलव्ध गराउने भएको छ । यस सम्बन्धमा नेपाल टेलिकम र हङकङ्गस्थित टिएक्साको लोकल एजेन्ट हेमन्त ट्रेड सेन्टरबीच सम्झौता भएको छ
मोबाइल हरायो ? यसरी पत्ता लगाउनुहोस् कहाँ छ
अनलाइन दर्पण 2017-03-04
मोबाइल हराए वा चोरी भएका कारण समस्यामा पर्नु भएको छ ? यदी यस्तो समस्यामा पर्नु भएको छ भने त्यसलाई पत्ता लगाउने तरिका बारे सोचिरहनु भएको होला ?
मोबाइल हराएको खण्डमा त्यसको आइएमइआइ नम्बरका आधारमा चोरी भएको मोबाइल कहाँ प्रयोग भइर
सुर्खेतमा पहिलाे पटक वर्डप्रेश सम्बन्धि वर्कसप संचालन हुने
अाइ.सि.टि अध्ययन गर्ने बिधार्थिहरुको साझा मंच शिक्षा प्रविधि नेपालको आयोजनामा भाेली शुक्रबार बिहान ७ बजे सुर्खेत शिक्षा क्याम्पस बिरेन्द्रनगरमा १ दिने वर्डप्रेश सम्बन्धि वर्कशप संचालन हुने भएको छ l
वर्कशपमा सुर्खेतका ICT/I
बजारमा नयाँ मोडलको मोबाइल आएपछि किनौं किनौं नलाग्ने मानिस कमै मात्र हुन्छन् । तर, पुरानो मोबाइल हुँदाहुँदै नयाँ मोबाइल किन्न अप्ठ्यारै हुन्छ । पुरानो बेचेर नयाँ किन्ने योजना भए पनि भन्ने बित्तिकै बिक्ने कुरा पनि आउँदैन ।
सुरक्षित बन्दै बेनीबजार चाेकचाेकमा सीसीटिभी
अनलाइन दर्पण 2016-11-30
म्याग्दी, १५ मङ्सिर । म्याग्दीको सदरमुकाम बेनी बजारको सुरक्षाका लागि सीसीटिभीमार्फत निगरानी सुरु गरिएको छ । उद्योग वाणिज्य सङ्घ म्याग्दीको पहलमा रु १५ लाखको लागतमा बेनी बजारका विभिन्न स्थानमा सीसी
थाहा पाई राखौ : एप्पलको लोगो आविष्कारको कथा
अनलाइन दर्पण 2016-12-05
एजेन्सी । एप्पल कम्पनिको हरेक उत्पादनमा हामीले उसको लोगो देख्ने गरेका छौं । त्यो लागो अरुको भन्दा अद्भुत र अनौठो देखिन्छ । देख्दा अनौठो यो लोगो हाम्रो समाजमा प्रतिष्ठाको सूचक पनि मानिन्छ । यही लोगो फोन अर्थात आइफोन बोक्नेहरुलाई हाम्रो समाजमा सम्पन
यिनै हुन् सामाजिक सञ्जालमा चर्चित 'तरकारीवाली'
अनलाइन दर्पण 2016-11-06
चितवन-‘तरकारीवाली ने अपने लुक्स से किया इन्टरनेट परकब्जा’(भावार्थ: तरकारीवालीले आफ्नो सौन्दर्यले इन्टरनेट कब्जागरिन्) शीर्षकमा बिबिसी हिन्दी सेवाको अनलाइन संस्करणमा आइतबार राखिएको समाचार सामग्रीअझै लोकप्रियता
विश्वका ४ अर्ब मानिस अझै इन्टरनेटको पहुँच बाहिर
अनलाइन दर्पण 2016-10-23
विश्वमा झण्डै ४ अर्ब मानिसहरु अहिलेसम्म पनि इन्टरनेटको पहुँचमा नरहेको एक रिपोर्टले देखाएको छ । इन्टरनेशनल टेलिकम्युनिकेसन युनियन (आइटियू) को रिपोर्ट अनुसार विश्वका ३ अर्ब ९० करोड मानिसले इन्टरनेट प्रयोग गर्न पाएका
फेसबुकको भिडियो टिभीमा पनि !
अनलाइन दर्पण 2016-10-21
फेसबुकले आफ्ना प्रयोगकर्तालाई दिन प्रतिदिन नयाँ फिचर थप्दै गइरहेको छ यसै क्रममा हाल फेसबुकले एक रोचक फिचर ल्याएको छ । यसको माध्यमबाट प्रयोगकर्ताले टिभीमा भिडियो क्लीपहरु हेर्न पाउनेछन् ।
फेसबुक मेसेन्जरमा थप नयाँ दुई सुविधा थपिँदै
सामाजिक सञ्जाल फेसबुकले ‘म्यासेन्जर डे नामक नयाँ फिचर थप्ने तयारी गरेको छ। स्न्याप च्याटले अमेरिकी युवा माझ बलियो पकड जमाएपछि फेसबुकले उसका फिचरहरुलाई आफ्नो म्यासेन्जरमा समावेश गर्ने तयारी गरेको हो।